डेरानै लिएर बाईक चोरी गर्ने सात जना पक्राउ
आइतबार १०-११-२०७७/Sunday 01-24-2021/	05:56 pm
२८ पौष, २०७७
झापा । झापामा मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न सात जनालाई ईलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीले सार्वजनिक गरेको छ ।
१५ वटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटी सहित उनीहरुलाई सार्वजनिक सार्वजनिक गरेको हो । इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीले आज विहान पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गरि चोरीमा संलग्नहरुलाई सार्वजनिक गरेको छ ।प्रहरीले विर्तामोड क्षेत्रमा मोटरसाइकल चोरीको पेशानै बनाएका इलाम माइ नगरपालिकाका पाँच सहित सात जनालाई पक्राउ गरेको हो ।
उनीहरुलाई प्रहरीले इलामबाटै पक्राउ गरेको डिएसपी मुकुन्द रिजालले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेहरुमा माइ नगरपालिका–६ का मनिष गिरी, रोशन गिरी, राजेश गिरी, वडा नं. २ का रोशन तामाङ, पाँचथर फाल्गुनन्द –३ का क्षितिज भनिने रोशन तामाङ र माई नपा वडा नं. ८ का रोशन बुढाथोकी, ताप्लेजुङका सन्दिप लिम्बु र रहेका छन् ।
बुढाथोकी र तामाङले चोरी गरिएका मोटरसाइकल विक्रि गर्ने काम गर्थे भने अन्यले बिर्तामोडबाट चोरी गरेर पुर्याइदिन्थे । बेलुका ६ देखि ९ बजेसम्म अधिकांश मोटरसाइकल चोरी भएको प्रहरीको भनाई छ ।
चोरीपछि इलाम पुर्याएका मोटरसाइक्ल प्रहरीले बिर्तामोड ल्याएको छ । उनीहरुको साथबाट अपाची, पल्सर र एउटा स्कुटी बरामत गरि ल्याइएको प्रहरीको भनाई छ । बिर्तामोडमा डेरा गरि बस्दै आएका युवाले मोटरसाइकल चोरीलाई धन्दा नै बनाएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
बिर्तामोडमा डेरा बस्नुको कारणनै मोटरसाइकल चोरी गर्न देखिएको प्रहरीको भनाई छ । मोटरसाइकल खोजीका लागि बिर्तामोड प्रहरीले प्रहरी नीरिक्षक हरि बरालको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरेको थियो । केहि वेरमै चोरी गर्न सक्ने गिरोहले विर्तामोडका अस्पताल, विद्यालय, मार्केट, होटलमा पार्किङ गरि राखिएका मोटरसाइकल सहजै चोरी गरेको देखिन्छ ।
मंगलबार २८ पौष, २०७७ १५:२४:०० मा प्रकाशित
बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा–पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ
दुई सातादेखि खानीभित्र फसिरहेका ११ मजदुरको उद्धार, ११ अझै फसिरहेका छन्
बलात्कार अभियोगमा ट्राफिक प्रहरीसहित दुईजना पक्राउ
नेकपा विवाद–कर्णाली प्रदेशसभा अधिवेशन अनिश्चित
आइतबार थपिए २ सय ७० जना कोरोना संक्रमित , ४ सय संक्रमण मुक्त